Otu esi eme ka ihe nchoputa ihe okike gi di nma
Otu n'ime ihe ndị dị mkpa maka ịmepụta SEO na-emeri SEO na-emeziwanye usoro ọchụchọ ọchụchọ Google gị. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na Google na-etinyekarị engine engine ha algorithm, enwere ụfọdụ usoro kachasị mma iji bido ịmalite imezi ya, nke ga - eme ka ị banye Top 10 ọla edo na ibe mbụ ma hụ na ị so n'ihe mbụ ndị ahịa nwere ike ịhụ mgbe ị na-eji ọchụchọ Google.
Kọwaa ndepụta isiokwu - Chee echiche banyere otu ndị mmadụ ga-esi chọọ ngwaahịa na ọrụ gị, depụta ndepụta nke ha isiokwu ndị a, ma lelee okporo ụzọ e mere atụmatụ maka oge ọ bụla na ngwaọrụ dị ka Google's Keyword Planner. Kwụsị ndepụta gị gaa na ahịa ahịa kachasị elu, usoro kachasị mkpa.
Ezigbo ọdịnaya ga-emeri - Na-echeta mgbe niile ide ihe ederede, ọdịnaya dị elu nke na-adọta mmasị na-akpali ndị ọbịa ịkọrọ ya ma jikọta ya bụ ihe dị mkpa. Ezigbo ọdịnaya nwere ohere kachasị mma nke ịrịa ọdịnaya, na Google na-akwụghachi ụgwọ ọrụ nke ọma na ya na algorithm.
Mepụta peeji isi nkuku - Ọ bụrụ n’inwe peeji iri metụtara otu usoro isiokwu, Google ga - esiri ike ịchọpụta peeji dị mkpa. Kama, tụlee jikota ọdịnaya gị n'ime otu peeji nkuku. Site na otu peeji isi nkuku nwere ikike na isiokwu a kapịrị ọnụ, ọ nweghị mgbagwoju anya SEO, ị ga-ebuli elu.
Jiri isiokwu ikwughachi na mgbanwe na peeji nke ọdịnaya - relevantmepụta ọdịnaya peeji dị mkpa ka bụ ụzọ kachasị mma iji bulie elu, nnukwu akụkụ nke ihe okike bụ ojiji nke isiokwu ndị ezubere iche. Ejila ikwughachi okwu mgbe obula na ezi ederede, mana ikwesiri ikwughari nkpuru okwu gi n’ime ihe di n’ime ya ugboro 2-3 na peeji di mkpirikpi na oge 4-6 maka ogologo peeji. Tinye mkpụrụ okwu dị mkpa na okwu 50 mbụ gị, ebe ntinye mbụ nwere ike ịbụ akara nke mkpa.
Na-ebuli utu aha ibe gị - A Mkpado HTML na-akọwa aha ibe weebụ ma bụrụkwa nkọwa dị nkenke nke ọdịnaya peeji ahụ. Google weere na nke a bụ ihe kachasị mkpa dị na peeji SEO. Jide aha peeji n'okpuru 70 odide, na mkpa Keywords na aha, ọkacha mma na mbido. Ọ dịkwa mma itinye aha ụlọ ọrụ gị yana njedebe.
Dee nkọwa doro anya meta - A Ebumnuche HTML ka ọ bụrụ nkọwa dị nkenke nke ọdịnaya ibe weebụ ma rụọ nnukwu ọrụ na ịnweta ndị ọrụ. Debe nke gị nkọwa nke meta n'okpuru mkpụrụ edemede 150. Ikwesiri ịgụnye isiokwu dị iche iche na ederede gị, ebe ọ bụ na okwu ọ bụla dabara na ajụjụ ọchụchọ onye ọrụ ga-egosipụta n'atụghị egwu.
Jiri ederede dị iche iche dị ka ederede arịlịka maka njikọta dị n'ime Iji ederede nkọwa, nkọwa arịlịka dị mkpa na-enyere Google aka ikpebi ihe ibe a jikọtara na ya bụ ihe. Mgbe ị na-eji njikọ dị n'ime, ị kwesịrị iji ederede arịlịka bụ ọdịiche dị nso nke isiokwu gị ịchọrọ maka ibe ahụ, kama ahịrịokwu dịka pịa ebe a or budata ebe a. Ma zere iji ihe eji eme ihe. Iji ọdịiche dị nso ga - enyere gị aka ịkwado nke ọma maka isiokwu ndị ọzọ.
Echefula banyere akara ALT - ALT mkpado bụ ihe HTML eji arụ ọrụ iji kọwaa ederede ọzọ iji gosipụta mgbe mmewere etinyere ha (dị ka onyonyo) enweghị ike sụgharịrị. ALT mkpado nwere ike inwe njikọ chiri anya na Google SEO ogo, yabụ mgbe ị nwere onyonyo na ihe ndị ọzọ na ibe weebụ gị, gbaa mbọ hụ na ị na-eji nkọwa ALT nkọwa na mkpụrụedemede ezubere iche maka ibe ahụ.
Aha URL gị dị mkpa - URL ndị dị nkenke yiri ka ha na-eme nke ọma na nchịkọta ọchụchọ Google karịa nke dị ogologo, yabụ buru nke ahụ n'uche mgbe ị na-ewu saịtị gị. Jide slashes na opekempe. I kwesịkwara tinye Keywords na aha URL gị, ma gbalịa itinye ha nso na ngalaba aha gị. Mgbe ị nwere ọtụtụ Keywords na URL gị, kewapụ ha na hyphens.
Enweghị okpu ojii - Nwa okpu SEO na-ezo aka n'omume nke ịnwa ịghọgbu usoro ọchụchọ iji nye gị ọkwa dị elu site na iji usoro adịghị mma, dị ka ịzụta njikọ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-enwe ọ aụ nwa oge n'ọkwá n'ihi usoro okpu ojii, ọ ga-adị mkpụmkpụ. Google na - akawanye mma n’ịchọpụta aghụghọ ruru unyi ma mee elu mee ala ọganihu ị mere ga - ehichapụ algorithm melite, ma ọ bụ ka njọ, a ga - ewepụ saịtị gị na ndeksi kpamkpam.
Sochie ndị ọbịa gị ma na-eduga gị - Iji bulie nsonaazụ SEO gị, ọ dị mkpa iji tụọ mmetụta nke mbọ gị na ntanetị na ntanetị na ahịa / ahịa. Google Webmaster Ngwaọrụ nwere ike inye gị nghọta dị mkpa banyere otu saịtị gị si arụ ọrụ ma chọpụta mmejọ ndị ị kwesịrị idozi. An nchịkọta ngwá ọrụ dị ka Nchịkọta Universal nke Google na-enye aka maka ịlele ngbanwe nke okporo ụzọ ọchụchọ yana nsuso mmekọrịta ndị ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ gị bụ nsonaazụ SEO. Ngwaọrụ na-ere ahịa na ngwa ahịa yana ịkpọ oku ngwaọrụ DialogTech's oku nsuso) nwere ike inyere gị aka kegide ndị ndu na ire ahịa laghachi SEO.
Nweta mmekọrịta - Ihe ngosi mmekọrịta na-enwe mmetụta na Google SEO ogo ma ọtụtụ ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ kwenyere na ọ ga-abawanye. Ọ bụrụ na ịnweghị, tụlee ịtọlite ​​ụfọdụ mgbasa ozi mmekọrịta dịka Google+ na Facebook, ma bido iso ndị na-ege gị ntị na-emekọrịta ihe.
Nwee usoro njikọ njikọ - Ụlọ njikọ bụ okwu catchall maka omume nke ịmepụta njikọ mpụga na saịtị gị. E wezụga ịmepụta nnukwu ọdịnaya ndị mmadụ chọrọ ịkekọrịta, ịde blọgụ ndị ọbịa na ịjụ webmasters sitere na saịtị nwere ikike metụtara azụmahịa gị iji jikọta azụ na ibe gị bụ ụzọ dị mma iji wuo njikọ. Mgbe enwere ike, jiri mkpụrụokwu bụ ederede arịlịka maka njikọ gị, ebe nke a ga - enyere aka izipu akara na Google na ibe gị dị mkpa maka usoro ndị ahụ.
Etinye ego na saịtị nke enyi na enyi - Google ekwuputala a mobile-enyi na enyi ogo algorithm nke ahụ ga-enwe mmetụta dị ukwuu na nsonaazụ ọchụchọ ekwentị. Hụ ihe dịka 50% nke ọchụchọ niile emere na Google nọ na ekwentị mkpanaaka, oge a bụ ugbu a iji bulite maka mkpanaka ma hụ na ogo gị anaghị enweta nsogbu.
Iji mụtakwuo omume kacha mma iji melite ogo ọchụchọ gị na Google SEO na PPC ọchụchọ ad ROI, eBook nwere ike inyere aka, Nduzi nke Marketer na - akpọ Ndepụta maka Google SEO na PPC.
Tags: mkpado altbacklinksnwa okpuọdịnaya seoezigbo ọdịnayamma ogomelite seonjikọta n'imeikwughachi isiokwunnyocha nyochaisiokwu mgbanweKeywordsnkọwa nke metanjikarịchanjikarịcha aha peejiaha peejiọdịnaya ọdịnayaelekọta mmadụ na seourl slugs
Blair Symes bụ onye na-achọ ọgbọ n'ọchịchọ DialogTech, onye ndu na nyocha oku na akụrụngwa akpaaka. N'ime afọ 17 gara aga, ọ bipụtara ọtụtụ isiokwu, akwụkwọ ọcha, eBooks, na blọọgụ na isiokwu dịgasị iche iche, gụnyere ahịa B2B, akpaaka ahịa, na ahịa ọchụchọ.
Apr 14, 2015 na 7: 16 AM
Enwere m mmasị na post ekele dị ukwuu maka ịkekọrịta
Sep 20, 2015 na 1: 59 AM
Nnukwu edemede na m na-eme atụmatụ ịlebanye anya na ịchọpụta ọchụchọ m.
Sep 20, 2015 na 2: 30 AM
Daalụ maka ndepụta gị. Ihe “mepụtara peeji nke isi nkuku” banyere ịgbakwunye isiokwu "canonical" wdg na metas?
Sep 20, 2015 na 9:45 PM
Mba Canonical URLs bụ ebe ị nwere 100% oyiri ọdịnaya n'ofe saịtị, subdomains ma ọ bụ ngalaba ma chọọ engines ọchụchọ iji lekwasị anya n'otu ibe kama nkewa ikike n'etiti ha niile. Ibe nkuku peeji nke bu nkuku peeji. Wantchọrọ ijide n'aka na ịkewapụghị ikike gị na isiokwu enyere n'etiti ibe. Ọ ka mma ịnwe peeji pere mpe nke nwere oke nghọta karịa isiokwu nwere ọtụtụ peeji nwere nkọwa na nkọwa dị iche iche. Gbalịa ịmepụta ndị hierarchy maka saịtị gị ma kpebie isi peeji ịchọrọ n'ime ebe ahụ hi wee wuo peeji ndị ahụ.
Jan 22, 2016 na 3: 33 AM
Daalụ maka ịkekọrịta ozi mara mma gbasara Organic search perfomance
Mar 1, 2016 na 5: 17 AM
Daalụ maka nnukwu isiokwu nwere ozi dị mkpa.
Mar 11, 2016 na 2: 14 AM
Enwere m mmasị na ọdịnaya blog gị metụtara ndụmọdụ ọchụchọ organic .ọ dị ezigbo mma
Mar 29, 2016 na 10: 34 AM
Akwa post! M na-amalite ịchọpụta na ịmepụta ọdịnaya gị na ntuziaka "SEO" ọkọlọtọ ma na-elekwasị anya na ahụmịhe onye ọrụ / ebe nrụọrụ weebụ enyi na enyi na-eme ya. Ihe ọzọ kwesiri ka a mata bụ ọsọsọ! Anyị na-ebi ndụ anyị n'okporo ụzọ ọsọ ọsọ ugbu a ụbọchị, yabụ akụkụ nke ahụmịhe onye ọrụ nwekwara ike iwere dị ka "Emela obere Timmy echere". Nweta ọdịnaya kachasị ka ị dọta ndị ọrụ ngwa ngwa.
Apr 14, 2016 na 6: 53 AM
heloo blog a dị ukwuu
Apr 30, 2016 na 6: 10 AM
nnukwu blog. m na-anwale nke a na saịtị m dị na peeji Google mbụ. ekele ịkọrọ anyị…
Mee 6, 2016 na 8: 07 AM
Akwa Daalụ maka ndụmọdụ ahụ. M ga-amalite na-emelite m website ọzọ mgbe niile. Ozi dị mkpirikpi, dị mfe ma sie ike… Cool! Echere m na nha nke SEO na-eme dị ezigbo mkpa - ọ na-egosi gị ụzọ kwesịrị ekwesị. Nke a bụ ihe anyị niile na-eme. Ọnụ ọgụgụ SEO na-agbanwe weebụsaịtị anyị na ebe nrụọrụ weebụ.
Echere m na ozi a ga - enyere m aka imeziwanye SEO nke blọgụ m. Dị mfe ma ruo n'ókè. SEO = Ogo ọdịnaya, asọmpi & ezi uche KW ma ọ bụ nkebi ahịrịokwu igodo, bulie njikọ gị ma zere adịgboroja - naanị isi ihe iji nweta ọkwa dị mma. Idebe ọdịnaya ahụ dị ọhụrụ bụ n'ezie igodo. Icheta inweta njikọ inbound maka ibe na ederede nwere ike inye aka.
O doro m anya na SEO abụghị naanị ịchụpụ nsonaazụ mana ọ nwere ọnụego ntụgharị kachasị elu ma e jiri ya tụnyere ụdị ahịa azụmaahịa ndị ọzọ. Debe isiokwu ukwu na-abịa, m ga-alaghachi azụ! 🙂
Mee 17, 2016 na 9: 09 PM
nnukwu ndụmọdụ, m nọ na niche nke njem nke kachasị asọmpi iji nweta ezigbo okporo ụzọ.
Coimbatore na Ahịa Internetntanetị
Mee 27, 2016 na 5: 16 AM
ụda na-aba ezigbo uru blog, daalụ
Jul 14, 2016 na 12:12 PM
Great post .Otu bara uru bara uru.
Daalụ maka òkè.
Jul 28, 2016 na 4: 57 AM
Daalụ maka ịkekọrịta ozi mara mma gbasara arụmọrụ ọchụchọ Organic.
Sep 21, 2016 na 4:58 PM
Nnukwu ederede maka nchọta ọchụchọ nke Google n’isiokwu a na-enyere m aka.
Nov 25, 2016 na 7:02 PM
Nke a bụ n'ezie ezigbo ederede nwere ọtụtụ ozi bara uru. N'ikwu eziokwu, amatala m na m enweghị ihe ọmụma na ike nke isiokwu dị mma na nkọwa meta. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, aga m emeziwanye nke a. Daalụ!
Dec 18, 2016 na 7:48 PM
Echere m na ụbọchị ndị a ọdịnaya enweghị ike iwetara gị okporo ụzọ niile ma ọ bụrụ na ibipụta n'enweghị usoro ziri ezi. Daalụ maka ọdịnaya gị.
Jenụwarị 3, 2017 na 1:16 PM
Akwụkwọ na-enye aka ga-enyere anyị aka…
Apr 16, 2017 na 4: 55 AM
esi eme ka okporo ụzọ okporo ụzọ na-abawanye na weebụsaịtị. Emeela m ihe niile iji mụbaa okporo ụzọ na weebụsaịtị mana enweghị m nsonaazụ. Kedu usoro bụ usoro iji mee ka okporo ụzọ na-abawanye na weebụsaịtị
Apr 16, 2017 na 11: 21 PM
Ebe nrụọrụ gị na-amalite inweta ọkwa organic dị ka SEMRush, ma ị ka na-eli ozu miri emi na igwe ọchụchọ. Aga m akwado ịkwaga na CMS dị ka WordPress ma na-ebipụta isiokwu ndị bara uru na-aga n'ihu, ikekwe infographic. Ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịnweta ụfọdụ akwụkwọ ndị ọbịa na mpaghara gị ebe ị nwere ike jikọọ na saịtị gị na akwụkwọ edemede gị, ịnwere ike imezi ikike ọchụchọ gị.
Mee 15, 2017 na 6: 59 AM
Daalụ Mr. Douglas Karr.
Apr 17, 2017 na 11: 11 AM
Ndụmọdụ gị na-enyere m aka n'ezie. Ọdịnaya nke SEO bara uru nke ukwuu taa. Anyị na-eme SEO na ndụmọdụ gị na-etinye uru karịa ọrụ m.
Jun 13, 2017 na 5:13 AM
N'ezie egwu dị egwu! Daalụ maka ịkekọrịta nke ahụ na anyị.
Aug 1, 2017 na 10: 40 AM
nke a bụ oke ozi buru ibu ebe a. Gị na ndị ọzọ na-ekwu okwu nwere ike ikpuchi ihe niile. Ndị na-agụ ya kwesịkwara iburu n’uche na usoro ndị ọrụ na-ekere òkè dị ukwuu n’inyere Google aka ịghọta ma ọ bụrụ na ndị ọrụ na-emecha ọrụ nke ibe / ibe ọ bụla. Nke a na-agụnye ịlele nyiwe nchịkọta kachasị amasị gị na ịghọta otu ndị ọrụ ji arụ ọrụ na ọdịnaya ọ bụla. Ingghọta nke a na-enye gị nghọta na ma ndị ọrụ na-achọta ọdịnaya gị dị ukwuu, na-enye nkọwa, yana / ma ọ bụ na-ekekọrịta.
Ọkt 29, 2017 na 9:31 AM
Ihe magburu onwe ya !!
ee, mobile enyi na enyi na ebe nrụọrụ weebụ, meta aha, meta nkọwa, meta aha wdg bụ ezigbo ojiji maka inweta ihe okporo ụzọ na ọkwá. Ọzọkwa, njikarịcha onyonyo, ọdịnaya dị mkpa site na iji, ịbawanye oge ibu saịtị dị ezigbo mkpa maka ị nweta nsonaazụ kacha mma. Daalụ maka ịkekọrịta ndụmọdụ ndị a dị mkpa. Amụtala m ụzọ ọhụrụ ole na ole site na post gị.